Emulsifying igwekota, igwe na-ejuputa, igwe gwakọtara - Maxwell
Ihe karịrị afọ iri na ahụmịhe
O nwere ezi uche, kwụsie ike ma bụrụ eziokwu
Oge azụmaahịa ma rụa ọrụ nke mgbe azụchara ahịa
ANY WE NA-AKWCTKWỌ AKW .KWỌ AKW .KWỌ B B ỌZỌ
Wuxi Maxwell Automation Technology Co., Ltd etinyebere dollar otu nde dollar. Anyị bi na mpaghara mpaghara III. Anyị na-arụ ọrụ na ịchọ mma, ọgwụ, nri, ọrụ kemịkalụ, yana ijikọ mmepe, imepụta na ire ọnụ.
(Ngwaahịa anyị nke igwe; igwe na - anya igwe, igwe ihe, igwe igwe akara, igwe ihe igwe, igwe igwe, igwe igwe ihe, ihe ndi ozo.)
Wuxi bụ obodo mara mma, nke dị nso n’obodo Shanghai - obodo kacha buo ibu na China. Yabụ na ọ dị mma maka ibubata ngwa ahịa n'ọdụ ụgbọ mmiri na ụwa.
MAKA ỌRAC IMANỌ VACUUM
O bu igwe di nfe, odi nma na onu ahia.
FULL-AUTO PLASTIC TUBE jupụta na mmanụ azụ
Anyị na-enyocha njigide eriri, eriri nke na ejupụta nke igwe dị na igwe na-emechi.
EGO NA-EGO NA-EKURU EGO
N’ezie na-arụ ọrụ igwekota, ihe igwekota igwe na plọp na igwe ndị ọzọ na-ewu ụlọ.
China na-ebuputa plastik sịnịma dị elu
kwụa ụgwọ maka akwụkwọ akụkọ